Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Indho Indho Indoneesiya » Ma jeceshahay Cuntada Bali? Ku soo dhowow Bali
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Indho Indho Indoneesiya • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Daalacanayo Hadda
Bali waxay diyaar u tahay dalxiiska caalamiga ah marka mas'uuliyiinta ay bixiyaan iftiinka cagaaran.
Bali sidoo kale waa diyaar tanna waxaa lagu muujiyey barnaamij cusub oo cinwaankiisu yahay Welcome Back to Bali. Barnaamijkan wuxuu siin doonaa booqdayaasha macluumaad dhab ah oo ku saabsan waxa suurta gal ah, iyo waxa ay tahay in laga fogaado marka loo safrayo Jasiiradaha Ilaah.
Jasiiradda ilaahyadu waxay isu diyaarineysaa inay u furto booqdayaasha, laakiin waqtiga saxda ah weli ma cadda.
The Ururka Hotel Bali maanta lagu casuumay shir jaraa'id oo si heer sare ah loogu qabtay Hoteelka Grand Hyatt ee Nusa Dua.
Sidee bay uga duwanaan kartaa Bali, tallaabada ugu horreysa waa af-waraabin cajiib ah Bandhiga Cuntada Waarta ee Bali.
Ururka Hoteelka Bali ayaa maanta soo bandhigay App -ka “Ku Soo Laabashada Bali” oo ah aaladda dalxiiska si dib loogu bilaabo Jasiiraddan Indonesia, oo sidoo kale loo yaqaan Jasiiradda Jannada.
Laga soo bilaabo buuraha quruxda badan ilaa xeebaha qallafsan ilaa buuraha fulkaanaha ilaa xeebaha bacaadka madow, la yaab ma ahan in Bali loo yaqaan Jasiiradda Ilaahyada.
Waxay ku taallaa inta u dhaxaysa Java iyo jasiiradda Lombok, Bali waxay ku faantaa dhaqan hodan ah oo kala duwan oo aad u kala duwan.
"Bali waa noloshayda" - kani waa hadal awood leh oo ka tarjumaya xaqiiqda ah in Bali aysan ahayn sida meel kasta oo loo dalxiis tago ee ay tahay jasiirad qurux badan oo ay leeyihiin oo ay deggan yihiin reer Balinese oo soo dhoweysa booqdayaasha si ay ugu raaxaystaan ​​jasiiradda. Hadal ahaan waa shucuur, daacadnimo, iyo run, waxay adduunka ku martiqaadaysaa inay ogaato sababta Bali ay qaas u tahay.
Bali waxaa si xun u garaacay COVID-19 iyo xiritaanka warshadaha safarka iyo dalxiiska ee muhiimka ah.
Toddobaad ka hor Indonesia ayaa fududeysay xayiraadaha COVID-19 ee jasiiradda caanka ah ee dalxiiska ee Bali, in kasta oo socdaalayaasha caalamiga ahi marka ay yimaadaan ay la kulmi doonaan qawaaniin adag si ay gacan uga geystaan ​​xakameynta faafitaanka noocyada kala duwan, ayuu yiri wasiir sare Isniintii.
Goobaha dalxiiska ee inta badan jasiiradda ayaa hadda aqbali doona booqdayaasha, wasiirka badda iyo maalgashiga Luhut Panjaitan ayaa u sheegay shir dalwad ah, illaa iyo inta ay u hoggaansamayaan qawaaniin adag, sida ku caddeynta xaaladda tallaalkooda app-ka dowladda ee la xaqiijiyay.
Waqtigan xaadirka ah, Bali waxay inta badan u tahay bartilmaameedka suuqa gudaha, maaddaama Madaarka Den Pasar uusan weli u furin imaanshaha martida caalamiga ah.
Sida laga soo xigtay xubin guddi ka ah Ururka Hoteelka, xubnaha socdaalka iyo warshadaha dalxiiska ee Bali ayaa weli rajo wanaagsan leh waxaana ka buuxa rajo iyo xamaasad inay mar kale dib u bilaabaan safarkii caalamiga ahaa.
Soo-dhaweynta Soo-dhaweynta Dib-u-soo-dhaweynta ee maanta la soo bandhigay ayaa ah isha war-bixin la isku halleyn karo oo loogu talagalay dadka fasaxa si ay u qorsheeyaan una maraan socdaallada Bali si ammaan ah oo xilkasnimo leh.
Hadafku waa in la siiyo dhammaan booqdayaasha iyo la -hawlgalayaasha socdaalka macluumaadka ugu casrisan uguna saxsan ee ku saabsan xaaladda is -beddesha ee Bali.
Xogtu waxay ka timid ilo rasmi ah, oo la xaqiijiyey waxayna ku habboon tahay xaaladda hadda ka jirta Bali.
Macluumaadka ku yaal Ku Soo Dhawoow Bali, waa in laga caawiyo dadka safarka ah Bali si ay u gaaraan go'aanno xog -ogaal ah oo ku saabsan safarka Bali iyo joogitaanka Bali. Tan waxaa ku jira macluumaadka ku jira la-taliyayaasha safarka ee gaarka ah ee socdaalka gaarka ah iyo talo guud oo ku saabsan xaaladda hadda jirta ee ku saabsan xayiraadaha safarka hawada iyo tallaabooyinka ka jira Bali.
Dhammaan dadka socotada ah waxay u baahan yihiin inay qaataan mas'uuliyadda go'aannada safarkooda oo ay ku jiraan fahamka macluumaadkaas Ku Soo Dhawoow Bali looguma talagalin inay noqoto, mana aha in lagu tiirsanaado, beddelka talo sharci ama xirfad kale. Isticmaalayaasha waa inay helaan wixii talo xirfadeed ku habboon ee khuseeya duruufahooda gaarka ah.
Goobta waxaa taageera oo dayactira Ururka Hoteellada Bali.
eTurboNews ka qayb galay shirka jaraa’id ee maanta.
Shir Jaraa’id oo ay qabteen Ururka Hotel Bali.